IMageia 4 iyatholakala | Kusuka kuLinux
IMageia 4 iyatholakala
Ikhukhi | | Ukusatshalaliswa
Kusukela izolo inguqulo yesine yale nzalo kaMandriva iyatholakala.
Njengokusha kunokuthi iningi lamathuluzi wokusabalalisa selithathe isinyathelo se- I-GTK + 2 a I-GTK + 3 njenge-RPMDRAKE noma i-USERDRAKE, isibonelo. Ngaphezu kwalokho, ushintsho lwe imodi yomsebenzisi a i-polkit yokufakazela ubuqiniso njengezimpande.
Ngokunengqondo, ukuvuselela amaphakheji wokusabalalisa anjenge:
IFirefox ESR (leyo yiFirefox 24, kufanele babeke inguqulo yamanje)
… Phakathi kwabanye
Kulabo abangaxhasi i-GNOME Shell manje sebengafaka MATE 1.6 y I-Cinnamon kusuka ekuphumuleni okusemthethweni noma kwi-DVD. Ayatholakala Xfce, I-LXDE y I-RazorQT; Basinikeza ukukhetha.
Imininingwane emnandi yalolu hlobo yile Siyakwamukela Mageia lokho kuvela lapho ungena ngemvume okokuqala. Kusinika ukubuyekeza okuncane kwe-distro nenketho yoku faka amakhodekhi athandwayo nezinhlelo zokusebenza njengeFirefox, i-VLC, iFlash, njll.
Ngiyincoma kakhulu le distro, mhlawumbe hhayi kakhulu kubasebenzisi abasha ngokuphelele kodwa kulabo abanayo umbono we-GNU / Linux futhi bafuna uhlelo oluthi kulula ukuyisebenzisa futhi ube okuhle ibhalansi phakathi kokuqina nemali.
Mina engxenyeni yami sengivele ngiyifakile:
Landa iMageia 4
Khipha Amanothi | IsiNgisi
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » IMageia 4 iyatholakala
Ngiyabonga, ngike ngayihlola iMageia 4 ku-beta futhi isebenza kahle kakhulu, kepha ngenkathi ngilinde ukuthi inguqulo yokugcina iphume ngafaka iNetrunner 13.12 (64) manje sengiyayithanda, noma kunjalo ngizolanda iMageia ne yifake kudiski ehlukile nokuhlolwa.
Engikuthandayo ngeNetrunner ukuthi ngithola eziningi .deb kanye nezinqolobane zezinhlelo engizidingayo, yize iMageia nayo inenani elikhulu ... Yebo ... ukukhetha kokugcina phakathi kwalaba bobabili kuzoba nzima ukushiya njengohlelo oluyinhloko, Ngizolalela imibono ukuze ingiqondise kancane.
I-Well Netrunner iphuma ku-Ubuntu ngakho-ke lokho kulindelekile.
Ama-Mageia repos anempilo enhle kepha uma ufuna okuthile kuwo kungakunika ikhanda ... kwesinye isikhathi.
Ngabe ukhona omunye wabaphathi ongashintsha leyo "nguqulo"? kwangishiya 😛
Sengivele ngiyifakile futhi isebenza kahle kakhulu, ngibe neMageia kusukela kunguqulo yayo yokuqala, ngiyakuncoma uma ungakayiboni, ukuthi ubheke lesi sixhumanisi engisilayishe kamuva nje: https://www.google.com/url?q=https://blog.desdelinux.net/mageia-3-que-hacer-despues-de-instalacion-personalizacion-y-mejoras/&sa=U&ei=QKnuUujbMZKA7Qa0iYHYDg&ved=0CAsQFjAA&usg=AFQjCNEQOF1yjcHlC2tzEF6WG6nWEnwiBA
Kungumhlahlandlela kuMageia 3, kodwa futhi kusebenza kule nguqulo.
Yebo ngangikubonile, kuphelele impela. Futhi empeleni njengoba iMageia ingenzi izinguquko ezinqala iyaqhubeka nokusebenza.
mandriva noma ubuntu okulula?
UJohn Titor kusho
Ukuzinza nokugcina isikhathi. Kuzwakala kuthakazelisa, angikaze ngiyisebenzise, ​​kepha ngokusobala kufana ne-OpenSUSE. Kungilethela ukulangazelela, angiqiniseki ukuthi kungani ngingasayithandi, ngicabanga ukuthi bengingathandi ukuthi uhlelo lungenzele konke.
Phendula uJohn Titor
IMageia 4 enye yezinhlelo zami engizithandayo nge-kde futhi manje ifaka isinamoni 2.0.4
Kubukeka sengathi kupholile iMageia 😀
Into emnandi ngeyeCaledonia nesikhwama ngaphezu kwanoma yini.
I-Alberto Villa kusho
Uyazi ukuthi iyayisekela iSteam?
Phendula i-Alberto Villa
Ubuntu ilahla iNautilus / File, izoba nomphathi wayo wefayela
Ungayifaka kanjani i-LibreOffice 4.2 ku-Ubuntu